Ny fiarovana ny Fananana ara-Tsaina ny Zon'olombelona any Shina - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Ny fiarovana ny Fananana ara-Tsaina ny Zon'olombelona any Shina
Tamin'ny-tampon'ny ny lisitra rehetra momba ny fanamby, ary ny lohahevitra aho nanontany momba ny matetika indrindra, dia ny fanontaniana ny fomba ny orinasa afaka miaro ny teknolojia tena mitondra ny firenenaRehefa miaraka ny tsy ara-dalàna ny fampiharana azy, ny olana mikasika ny fiarovana ny fananana ara-tsaina zon'ny (IPR) dia ny tokan-tena sakana lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa mba handresy rehefa mieritreritra momba ny hiditra ao Shina ny an-tsena. Talohan'ny miresaka momba ny olana, dia mariho fa misy fomba isan-karazany mba hiarovana ny teknolojia ao Shina.
Tsy misy na iray aza, mazava ho azy, dia foolproof, fa naka sasany fepetra afaka mampihena betsaka ny mety.
Ohatra, fametrahana ny tanteraka an'ny orinasa vahiny izay azo atao ny fanamboarana ny vokatra, fa tsy hiditra ao an-joint venture, manome fanaraha-maso bebe kokoa, izay efa miditra amin'ny teknolojia sy mahalala-fomba. Ny fandikana ny dingana orinasa ho maro discrete asa fa dia hita any amin'ny toerana samy hafa dia afaka manakana na tokan-tena ny vondrona mpiasa avy nahita ny dingana rehetra. Hafa ny fomba tsara mba hisorohana ny teknolojia leakage ny fanamboarana kokoa singa, izay ny ankamaroan ny teknolojia dia voarakitra, tao-trano, fa tsy outsourcing.
Mihoatra noho ny tactical soso-kevitra, misy roa mivelatra kokoa ny olana fa izaho hanangana.
Voalohany, dia manontany raha toa ny orinasa afaka tena manam-bola tsy mitondra ny vokatra any Shina. Faharoa, hamafisiko fa i Shina dia nihen-danja eo amin'ny teknolojia ary famoronana zava-baovao, ary manome ny ohatry ny fanantenana ho an'ny rehetra ny teknolojia tompony. Noho ny fangatahan'ny namana iray aho, dia niresaka momba ny any Shina ny TALE jeneralin'ny dolara enim-polo tapitrisa, U. mpanamboatra manokana injeniera fitaovana taona maro lasa izay. Rehefa niantso ny nanendry ny hariva avy any an-tranoko ao Beijing, ny filoha TALE jeneralin'ny nilaza tamiko fa ny orinasa dia efa mihoatra ny iray dimam-polo isan-jato tsena any Etazonia sy efa nanomboka nahita mafy liana amin'ny ny vokatra avy any Shina. Ny orinasa efa nanakarama ny mpandraharaha, ny Sinoa-pirenena, mba hampitombo ny tsena, ary ny orinasa export sales an'i Shina dia tsy mitsaha-mitombo ny vokatr'izany. Ny TALE jeneralin'ny naniry ny hevitro raha toa izy dia tokony manomboka mieritreritra momba ny fametrahana ny fanamboarana trano ao Shina. Alohan'ny afaka mamaly aho nanana fanontaniana."Tena mihevitra ve ianao fa ny vola miditra fahafahana mety ho azo raha toa namboarina tany Shina."Mahitsy eny, hoy izy hoe:"mihevitra aho fa afaka manao araka dolara efa-polo tapitrisa isan-taona."Nandre izany, ny toro-hevitra dia mazava."Raha ny tsena dia be ao Shina, ho an'ny vokatra, te tsaratsara kokoa ny manomboka amin'ny famokarana eto,"nolazaiko azy. Avy eo aho dia nandeha mba hazavao."Ny vokatra dia asa mafy, nivory vokatra. Amin'ny fitaterana sy ny andraikiny, dia nafarana price dia efa tsara tarehy ambony. Ary noho ny avo afa-po ny asa, misy be dia be ny toerana ho an'ny orinasa Sinoa iray mba hanova injeniera ny vokatra sy ny hivarotra izany ho be loatra."Izy dia avy hatrany dia nahita ny fotoana, ary nanaiky izy, saingy tsy tena nataony."Very varotra ao Shina dia tsy ny olana lehibe indrindra raha tsy manomboka ny fanamboarana ny eto,"izaho koa."Mandra-pahoviana moa ve ianao mihevitra fa ho eo anoloan'ny Shinoa mpifaninana manomboka maso ny tsena, ary izay ambony kokoa ny vidin-javatra, ao amin'ny United States. Raha tsy mahazo ny eto, dia ny dimampolo isan-jato ny tsena ao an-trano ihany koa ny mety ho tandindomin-doza."Tsy ilaina intsony ny milaza, izany dia mampieritreritra ny eritreritra izay fa toa tsy heverina.
Fahanginana azo tsofina avoakany indraindray, ary izay rehetra nandre dia fahanginana tao amin'ny faran'ilay ny telefaonina.
Vao nilaza taminy fa, amin'ny fomba maro, ny fanapahan-kevitra ny fanamboarana ao Shina dia malalaka kokoa ny fiantraikany noho izy efa tonga saina.
Toy ny TALE jeneralin'ny orinasa, dia ilaina mba manahy be dia be mihoatra noho ny azo tendrena ho ny haben'ny ny Shina tsena.
Ny ho avy viability ny orinasa mety tena tsara ho amin'ny loza izy raha tsy nametraka ny fivarotana ao amin'ny firenena.
Ny TALE jeneralin'ny dia mamindra fo sy nisaotra ahy rehefa nifarana ny resaka, fa azoko antoka fa efa potika ny andro.
Io olana atrehin'ny orinasa rehetra fa manana tsara ny teknolojia sy ny lehibe ny tsena ivelany i Shina ankehitriny.
Raha ny orinasa tsy mianatra mba hifaninana atsy ho atsy ny mpifaninana ao Shina, izany mety tsy ho ela miady koa ireo orinasa ao amin'ny manokana turf. Ny taloha ny football fomba fiteny fa ny fiarovana tsara indrindra dia tsara ny fandikan-dalàna manana be dia be ny fampiharana eto. Misy ny faharoa, be fanantenana kokoa, fotoana izay aho dia ho foana sy izay fa i Shina dia miova. Ny Thomson Reuters tatitra fikarohana, nivoaka tamin'ny desambra, nampiseho fa i Shina dia lasa izao tontolo izao ny top patent filer tamin'ny, na ilay hoe hisongona an'i Etazonia sy Japana ho toy ny firenena dingana ny zava-baovao mba hanatsarana ny fananana ara-tsaina zon'ny manara-maso ny firaketana an-tsoratra. Ny tatitra no nilaza fa ny firenena ny tanjona dia ny mba hanova ny tenany avy ny"vita avy any Shina"ny"natao tao Shina"tsena, ny governemanta no nanosika ho zava-baovao eo amin'ny sehatra tsy miankina toy ny fiara, pharmaceuticals sy ny teknolojia. Ny tatitra no nilaza fa namoaka patent fampiharana avy any Shina no antenaina ho tanteraka efa ho, ao amin'ny, nanaraka ny Etazonia amin'ny manakaiky ny, sy Japana amin'ny. Namoaka fampiharana avy ao Shina patent birao efa nitsangana tamin'ny eo ho eo. fito isan-jato isan-taona avy amin'ny, tamin'ny taona mba ho, tamin'ny taona, ny fanadihadiana dia nampiseho. Mihamaro ireo orinasa Shinoa ho patent mpihazona, dia avy eo izy ireo manana tombotsoa manokana amin'ny fiarovana ny teknolojia, tahaka ny iraisam-pirenena namany. Kokoa noho ny hafa mahatonga izany fironana dia fiara ny hoavin'ny IPR fiarovana ao Shina.
Ohatrinona no mpisolovava misahana ny taratasy fangatahana. Quora
il-kumpens għad-danni u ċ - Ċina-Liġi tal-Għarfien